Top 10 Talk Show mampiantrano ny fotoana rehetra
Top 10 Talk Show Mampiantrano
Azo antoka, lohateny mafy ity: Top 10 Talk Show mampiantrano ny fotoana rehetra . Saingy sarotra ny miady hevitra amin'io lisitra io, na dia mihoatra noho ny fandraisana azy aza ianao. Isaky ny mpampiantrano dia eto satria izy ireo dia nanao zavatra iray tsy manam-paharoa amin'ny zavamanana na lasa lasa angano amin'ny fitadiavana toerana ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika.
Ny anton'ity lisitra ity dia ny tsy fisian'ny toby vehivavy. Ny roa ihany no nanao ny lisitra - Oprah sy Rosie. Oprah ho an'ny mpanjakavavin'ny ankamaroan'ny media-ness sy i Rosie ho an'ny tokantrano tokana tsy mitsahatra mamelabelatra ny fomba fampisehoana talk-show androany izay notononan'i Merv Griffin sy Dick Cavett.
Antenaina fa hiova io fironana io - ary hiova io lisitra io mba hisaintsainana izany.
Ny mpampiantrano 'Tonight Show' Johnny Carson. Getty Images
Johnny Carson dia ho fantatra mandrakizay amin'ny maha-mpanjaka ny alina fahitalavitra. Ny 30 taona niorenany tao amin'ny The Tonight Show niaraka tamin'i Johnny Carson dia toy ny zava-bita - na ela loatra na ara-artistika - ho an'ireo hetsi-panoherana ankehitriny sy ho avy.
Carson dia nanamboatra ny volavolan-dalàna, novokarina niaraka tamin'ireo skoto malaza sy ireo karazana tsy hay hadinoina, ary nanjary tian'ny Amerikanina tanora sy antitra. Ny ankamaroan'ny mpanolotra fandaharana rehetra nandritra ny 20 taona farany dia ahitana an'i Carson ho fitaomam-panahy sy fitarihana, toa an'i David Letterman, tompon-dakan'i Jay Leno sy tompon-trano Conan O'Brien teo aloha. Bebe kokoa "
Resaho ny lahatsary fampiantranoana sy fampahalalam-baovao Oprah Winfrey. Getty Images
Olom-belona iraisam-pirenena ary olom-pirenen'ny fanjakana media iray ahitana ny fahitalavitra, ny horonan-tsary, ny radio, ny tranonkala ary ny media sosialy, ny fanabeazana ary ny maro hafa. Manana ny tambajotrany sy ny fisehony izy. Izy dia nantsoina hoe "vehivavy matanjaka indrindra eran-tany" tamin'ny gazetiboky Time , ary ny Life no nanamarika azy tamin'ny lohateny hoe "vehivavy manan-kaja indrindra ary Afrikana-Amerikana indrindra amin'ny taranaka fara-mandimby."
Ny gazety aza dia nampiditra azy tao anatin'ny lisitr'ireo "olona 100 izay nanova izao tontolo izao." Ny lisitra dia ahitana an'i Jesoa Kristy sy i Neny Theresa. Ary misy ihany koa fomba fiderana be loatra mba hizarana. Ny tena mahavariana dia ity dia nanomboka tamin'ny fampisehoana lahateny tokana, nanomboka tany Chicago tamin'ny taona 1980 tany ho any. Nifarana tamin'ny faran'ny taona 2011 ny fandaharana. More »
Former Tonight Exit Show host Jack Paar. Camrique / Getty Images
Ho hitanao fa maro amin'ny Tonight Show Show ireo mpampiantrano ao amin'ny lisitra anananay, raha tsy noho ny fandaharana Tonight Show Show dia toy ny mpamorona ny karazana. Jack Paar dia nanaraka an'i Steve Allen. Angamba malaza indrindra, Paar tampoka niala ny The Tonight Show taorian'ny iray tamin'ireo vazivazy monolosy nataony dia nosivanin'ny NBC. Niainga avy hatrany izy taorian'ny nanolorany ny volony ho takarivan'ny marainany, ka namela ny mpilaza azy, Hugh Downs, hameno ny sisa amin'ny fandaharana.
Niverina izy iray volana taorian'izay, ary nanolotra ilay tsipika malaza hoe: "Raha niteny aho talohan'ny nanapahako hevitra ... Mino aho fa ny zavatra farany nolazaiko dia hoe: 'Tsy maintsy misy fomba tsara kokoa ahafahana manao fiainana noho izao.' Eny, nitazana aho - ary tsy misy izany. "
David Letterman, mpanentana ny Late Show, tamin'ny Awards 2011 Comedy. Dimitrios Kambouris / Getty Images
Ilay mpandova tsy azo ravana dia hita ho an'ny satro-boninahitra an'i Johnny Carson tamin'ny taon-dasa, David Letterman no lahateny fampisehoana talk show fampiantranoana ireo mpikomy. Betsaka no natao tamin'ny Dave sy ny fialany tamin'ny NBC taorian'ny nanomezan'ny tambajotra ny Jay Leno The Tonight Show tany am-piandohan'ireo taona 90.
Ary na dia Tononkira antoandro aza dia nanakombom-bava ny fanamarihana raha mbola teo amin'ny rivotra i Letterman, tsy nisy ny hery ary ny fitifirana nataony teo ambanin'ny Allen, Paar ary Carson. Moa ve izany raha niala tao amin'ny toerany Late Night amin'ny Letter Tonight i Letterman? Mety hifamaly izahay, angamba .
Ny rano rehetra eo ambanin'ny tetezana izao. Letterman dia efa misotro ronono, ary toy izany koa i Leno, mamela ny taranaka ho avy hiady ho an'ny toerana ambony farany alina.
Steve Allen, tompon'antoka tamin'ny The Tonight Show. Hulton Archives / Getty Images
Steve Allen dia mpanentana ny Toniziana voalohany ary ny hazakazaka nataony nandritra ny fampisehoana (nanomboka tamin'ny 1954 ka hatramin'ny 1957) no nanomana ny sehatra ho an'ny fampisehoana rehetra ho avy. I Allen dia heverina ho loharanom-pifaneraseran'ny volavolan-dalampanorenana, fanasongadinana ary fifanakalozan'ny mpihaino. Noho izany, amin'ny fomba tena lehibe dia azontsika dinihina an'i Allen, rain'ny fandaharana amin'ny andro maoderina.
Satria nalaza tamin'ny mpijery i Allen, nomen'i NBC azy ny lahatsoratry ny praiminisitra. Raha tsy hoe niala ny Tonight Show , dia nampiantrano ny programa roa i Allen, nifampizarana ny adidiny ho an'ny fandefasana an'i Ernie Kovacs nandritra ny fotoam-piasany farany tamin'ny 1956-57. Bebe kokoa "
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Bachrach / Getty Images
Tsy afaka hiresaka momba ny kabarin'ny lahateny ianao raha tsy miresaka an'i Dick Cavett. Nanao fety nandritra ny 50 taona mahery ilay lehilahy, ary ny programa nomena azy, The Dick Cavett Show , dia niseho tamin'ny endrika samihafa tao amin'ny ABC, CBS, PBS, USA, CNBC ary TCM nandritra ny alina, ny alina sy ny alim-bolana. Manoratra bilaogy ao amin'ny The New York Times izy ary mpanoratra ny talk show . Ny mpanoratra slave Clive James dia miantso an'i Cavett "tena mahavariana miaraka amin'ny taha-pahalalana mahavariana, i Cavett no mpanolotra fanatanjahan-tena miavaka indrindra any Amerika, raha toa ka tena tadiavina ny hevitrao sy ny sainao".
Merv Griffin dia nanao fandaharana amin'ny fahitalavitra androany izay androany - farafaharatsiny amin'ny endrika Ellen DeGeneres sy Rosie O'Donnell no tsara indrindra. Nanomboka ny asany tamin'ny 1948 ho mpihira mpiangaly gadra ilay mpitsidika resadresaka, ilay crooner ao ambadiky ny hira nihira izay nahazoako boll Cocoonuts . Ny fahombiazany dia nanosika azy hiditra tao amin'ny orinasam-pifandraisan-davitra, ary i Griffin dia nitsikitsiky toy ny mpilalao fampiantranoana sy mpiantrano vahiny ho an'i Jack Paar ao amin'ny The Tonight Show .
Maro no nihevitra fa handresy an'i Paar izy, saingy lasa nankany Johnny Carson io asa io. Fa kosa, Griffin dia nitaritarika tao ambadiky ny biraon'ny fandaharam-pitenenany androany. Ny fitsidihan'i Merv Griffin tamin'ny 1965 dia nihazakazaka - nifanandrify sy nanomboka - nandritra ny 21 taona, nifarana tamin'ny taona 1986.
Jon Stewart, mpanolotra ny 'The Daily Show'. Getty Images
Ny fanampiana farany indrindra amin'ny vondrona misy antsika, fa mbola iray amin'ireo manan-kery indrindra. Jon Stewart ary nisy fiantraikany tamin'ny lahateny ara-politika fa tsy nisy fampisehoana hafa natao talohan'izay.
Ny sasany manome azy ny fanomezam-boninahitra (na ny tsiny) noho ny fialany amin'ny asany amin'ny tariby misy tariby maromaro. Ary ireo mpitsidika ny alina dia nivoatra avy amin'ireo olo-malaza izay mampiroborobo ny fialam-boly farany ho an'ireo mpahay siansa, mpikatroka, loholona ary filoham-pirenena.
Ny dikan-tenin'ny The Daily Show dia tsy maintsy nijanona ho an'ireo mpanao hetsi-panoherana - ny ilany havia na havia - ary i Stewart dia nanome lahateny ara-tsaina ary matetika mametraka fanontaniana izay hanohitra ny fampisehoana politikan'ny Alahady maraina.
Mba hanampiana azy rehetra, ny lehilahy dia mahatsikaiky sy mahasosotra. Izay angamba no fitaovam-piadiana rehetra ao aminy.
'Jereo' Rosiana O'Donnell mpiara-mitantana. Robin Marchant / Maka sary
Ho an'ny sasany, Rosie O'Donnell dia tsorakazo momba ny adihevitra, manakorontana ny adihevitra amin'ny alàlan'ny blaoginy sy ny nahatonga azy ho vazivazy miaraka amin'ny fanombohana ny taona ho toy ny mpiara-dia ao The View . Saingy tamin'ny taona 1986, rehefa naneho ny lahateniny androany ny The Rosie O'Donnell Show premiered - ary ny fahombiazana tamin'ny alina - dia nantsoina hoe "The Queen of Nice" i Rosie.
Raha ny marina, ny fampisehoana azy (toy ny miverimberina amin'ny lahateny mahaliana sy mahafinaritra mampiseho an'i Merv Griffin sy Dick Cavett) dia nandresy ny fon'ny olona an-tapitrisany satria ny tara-masoandro hafa tamin'izany fotoana izany dia somary saham-boalavo, somotra ary matetika midika hoe tezitra ( The Jerry Spring Show , Maury , The Sally Jesse Rafael Show ). Ny fahombiazan'ny fampisehoana dia nanampy tamin'ny famoahana an'i Ellen ary nitondra fahatsarana vaovao ho an'ny fandaharana talkative tolakandro.
Hall Hall, talk show, mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika. Angela Weiss / Getty Images
Talohan'ny Asehon'ny The Arsenio Hall Show sy ny mpihaza Arsenio Hall, tamin'ny taona 1989, ny ankamaroan'ny mpandrindra dia nihevitra fa ny fanombohana fampisehoana an-tsokosoko ny lalao malaza Johnny Carson dia ny kilalao adala. Saingy avy eo i Hall dia nampiseho azy ireo ny fomba rehetra nanaovana azy.
Ny fialany? Tazony ny mpanatrika fa tsy hita i Carson: Generation X sy ireo tanora izay naniry ny MTV. Niorina ny toeran'ny efitrano - tsy mifanentana, jazz, fifankatiavana amin'ny superstar Eddie Murphy - ary ny fitiavam-boninahitra sy ny sangisangy no nandrombaka ny rehetra.
Indrisy fa ny fialan'i Carson tamin'ny Tonight , izay niafara tamin'ny fialan'i Letterman avy any NBC, dia nitarika ho amin'ny fanafoanana ny Hall (ankoatr'ireo antony hafa). Maro amin'ireo toeram-pamokarana izay nandrehitra ny fandaharam-baovaon'ny Hall no nametraka ilay fampisehoana mba hitondra ny.
'Andriamatoa miaramila' 3 Fizarana 3
Ny fotoana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny fahitalavitra Big Brother TV
Ireo Top Five ratsy indrindra tamin'ireo taona 1960 tao amin'ny Batman TV Series
Ahoana ny fomba handraisana ny Ticket Oprah Winfrey
Hahita ny 'Chrisley mahafantatra tsara indrindra'
Ny fomba hahazoana tapakila malalaka amin'ny 'The Tonight Show' an'i Jimmy Fallon '
Hihaona ny "Cast de base" voalohany
Palettes sy ny teknikan'ny Rembrandt taloha
Fikambanana Willow Creek
Iza no nantsoina hoe 'Talented Tenenth'?
Nonna (Grandma) amin'ny teny italianina
Ny biography of Walter Gropius
Henoy ny podcasts amin'ny teny alemana
La Navidad: Arovana Eoropeana Voalohany any Amerika
BERTRAND - Faminaniana sy Tantaram-pianakaviana
Tanjon'ny statistika momba ny adiresy ao Tulane
Filoha fito no nanompo tao anatin'ny 20 taona talohan'ny ady an-trano
Stupid Bill O'Reilly Teny nalaina
Ny fianarana Baiboly any Appalachian
Ahoana ny fomba hananganana ny lehibe
Mpitsoa-ponenana any Puerto Rico any Etazonia?
Ny Fugue Baroque: Tantara sy Toetoetrany
Ahoana no nahatonga ny dinôzôro malama?
Ny fizarana asa amin'ny fikarohana fikarohana momba ny fiaraha-monina
Famaritana sy Ohatra avy amin'ny mpandidy amin'ny teny Anglisy